Ifulethi elikwikhaya elineminyaka eli-120 linezinto ezininzi esinokuzinikezela
Quaint 400 square foot flat on lower level of 120 year-year-old house kwilali yaseBullville Phakathi kweMiddletown kunye nePine Bush kufutshane nekona yeRoute 17K kunye neRoute 302. Le ndlu ibandakanya igumbi lokulala, igumbi lokuhlala, ibhafu epheleleyo kunye nekhitshi, ebekwe kwi-3 /4s yehektare. Ifakwe ngokupheleleyo kwaye igcwele izinto eziyimfuneko kunye ne-gazebo yangaphandle kunye nomgodi womlilo ofumaneka kwiindwendwe. Ukukhwela okufutshane ukusuka kwizinto ezininzi ezinomtsalane. Funda iinkcazo phantsi komfanekiso ngamnye ngolwazi oluthe kratya.
Ukusetwa okuzolileyo kunye ne-gazebo yangaphandle kunye nomgodi womlilo. Indawo yokuhlala isezantsi ngoko ke kunokubakho isandi esivela kubantu abahamba phezulu.
Ikhitshi igcwele ikofu, iikomityi ze-k, iti, iswekile, iziqholo, amaqanda, i-oatmeal epakishwe ngabanye, i-snacks, i-creamers, ijeli, ibhotolo, kunye nantoni na endinayo ngelo xesha.
Igumbi lokuhlambela ligcwele iitawuli, iimpahla zokuhlambela, iphepha langasese, ishampoo kunye nokuhlamba umzimba.
Njengoko ezinye iindwendwe zisitsho, ifanelekile kwisibini esinomntwana omnye, kodwa kukho ibhedi esongwayo esongezelelweyo. Igumbi lokulala linobukhulu obugcweleyo, ibhedi ephindwe kabini kunye nesofa yokutsala yibhedi enye.
Qiniseka ukuba ujonge incwadi yam yesikhokhelo. Ndineendawo ezininzi ezinomdla zokundwendwela ezidwelisiweyo.
Ifakwe kwilali yaseBullville kumgama wokuhamba wepizza, imakethi yasefama, iicawe ezintathu kunye nesikhululo segesi esinedeli kunye negrosari. Umzila 302 unengxolo encinci, kodwa uyathula kude kube kungabikho traffic ebusuku. Sikwilali ephakathi kwamaqashiso amabini angenanto ke akukho msebenzi ungako kule ndawo. Akukho bamelwane basebenzayo kwicala lethu lesitrato ngaphakathi kwekota yeemayile.
Umnini unendawo yokuhlala kwipropati kwaye uyafumaneka xa engekho emsebenzini.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Bullville